33Hampitàna: Fanangonam-bola ho an'ny mpijery in-View miaraka amin'ny sivana fisolokiana mialoha ny bid | Martech Zone
33Hampitàna: Fanangonan-karena ireo mpijery anaty sivana miaraka amin'ny sivana fisolokiana mialoha ny tolotra
Talata, Novambra 15, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Hitanay ireo mpitory an-tserasera izay sahirana amin'ity taona ity. Betsaka ny nampitombo ny votoatin'ny votoatiny, nanitatra ny fandrakofan'izy ireo lohahevitra, nividy mpihaino hanatsara ny statistikan'izy ireo ary nanokatra ny tranonkalany tamin'ny dokam-barotra rehetra. Izaho manokana dia mino fa lesoka izany. Nisoroka ny fividianana mpihaino izahay, nitazona ny lohahevitray ho henjana, ary nandà ny dokam-barotra matetika izahay tamin'ny fanaovana dokambarotra tsy lohahevitra.
Soa ihany fa mamaly ireo tambajotra dokambarotra. Tombanana ho $ 160 miliara no ho lany manerantany amin'ny fanaovana dokambarotra dizitaly amin'ity taona ity, araka ny zenevrie Research. Sehatra toa 33Amba manantena ny hampifanaraka ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny dokam-barotra an-tserasera ho an'ny firosoana bebe kokoa fa tsy hifantoka amin'ny refy fahitana fotsiny. Ny dokam-barotra sy ny CMO dia mila manamarina hatrany ny ROI amin'ny fandaniana doka an-tserasera. Ny fenitry ny indostria toa ny Media Ratings Council (MRC), dia nametraka ambany loatra ny bara raha te hamantatra raha heverina ho doka azo zahana.
Ny fijerin'ny doka finday sy Desktop dia mitaky farafahakeliny 50% ny teboka hijerena farafahakeliny iray segondra amin'ny doka aseho, roa segondra ho an'ny doka video. MRC
Etsy ankilany, ny mpitory dia sahirana amin'ny fomba fanaovana vola amin'ny tranokalany. Kivy ny mpanjifa, tototry ny hafatra tsy misy dikany na fanakorontanana rehefa mihinana atiny. Ireo olana ireo sy ny fanadihadiana lalina ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny doka an-tserasera izay namolavola ny famolavolana sy ny fivoaran'ny vokatra roa vaovao 33Amba.
Mampita ny fahitana ambony indrindra an'ny indostria ny unitsike doka horonantsary sy fampisehoana vaovao
33Amba nanitatra ny sehatra fandaharana tamin'ny alàlan'ny fanombohana ny Horonan-tsary in-Feed Desktop ary Fiantraikany amin'ny famahanana amin'ny Desktop. Natao hanampiana ireo mpitory hitondra ny fidiram-bola mitombo, ireo vokatra vaovao ireo dia singa dokambarotra tsy manelingelina sy misy fiantraikany be izay hita ao anatin'ny votoatin'ny tranokala na famahanana vokatra. Ireo singa dokam-barotra dia mamaly ny fihetsiky ny horonam-bokin'ny mpampiasa ary hita maso hatrany raha toa ka 50 isan-jato eo ho eo ny fahitana.
Rehefa mitombo ny lazan'ny video, 33Amba'Unitiona doka horonantsary horonantsary Desktop In-Feed dia milalao toerana 15 sy 30 segondra izay manitsy ny fijerena finday sy ny birao, mipoitra amin'ny riaka atiny raha 50% eo ho eo no jerena ny famoronana. Raha vantany vao tsy hitan'ny mpampiasa, miato ny horonan-tsary ary miverina milalao indray mandeha rehefa jerena. Ireo vokatra vaovao dia natao ho an'ny traikefan'ny mpampiasa tsy manelingelina, manome ny mpanjifa fifehezana tanteraka ny traikefa, miaraka amin'ny safidy hitantanana ny habetsahana na hanidy ny doka.
Mba hahazoana vola feno amin'ny tranokalanay, mila mamaly ny tombontsoan'ny mpampiasa izahay izay mitaky traikefa tsy manelingelina amin'ny birao sy finday ary koa ny fitakian'ny mpividy ny finday aloha, ny vokatra misy sakafo izay manome fahitana ambony. Peter Cunha, Channel fampiasam-bola
Ny fanadihadiana ny doka an-tserasera dia manambara ny fotoana fampiakarana mpampiasa
Hita taratra ireo vokatra vaovao 33Amba'fanadihadiana vao haingana, mandrefy ny fahitana ny fahitana ny doka an-tserasera sy ny faharetan'ny doka handrefesana ny fiantraikan'ireo zava-misy roa ireo amin'ny fifandraisan'ny mpampiasa. Rehefa avy nandinika doka an-tserasera 160 tapitrisa nanerana ny tranokalan'ny mpanonta 738 nandritra ny herinandro, 33Across dia nahatsikaritra fa amin'ny antsalany, ny ankamaroan'ny mpanjifa dia manindry doka amin'ny marika 15 segondra ary nitombo hatrany ny firosoana rehefa mandeha ny fotoana. Nopotehin'ny fitaovana:
50% n'ny fandraisana anjaran'ny mpampiasa no niseho tao amin'ny birao taorian'ny 15 segondra
Amin'ny finday sy ny takelaka, 50% n'ny fifandraisan'ny mpampiasa no niseho taorian'ny fito segondra
Tamin'ny marika 30 segondra, 68% n'ny fifamofoana rehetra no niseho tamin'ny birao, 74% no tonga tamin'ny finday, ary 78% no niseho tamin'ny takelaka
Ny fanadihadiana dia manaporofo fa raha te hahomby ny fanaovana dokambarotra an-tserasera, ny dokam-barotra dia tokony ho hita maso sy jerena mihoatra ny takiana farafahakeliny ankehitriny.
Raha ny metrika lehibe an'ny mpivarotra dia ny fahitana mifototra amin'ny làlan'ny MRC ary ny fanadihadianay dia manaporofo fa ny 98 isan-jaton'ny fifamofoana dia aorian'ny iray segondra. Mazava fa misy vintana kely ho hitan'ny mpampiasa io doka io, mainka tsy hirotsaka aminy. Ho an'ny CMOs mba hanana fihenan-danja amin'ny fampiasam-bolany, dia mila manandratra ny bara amin'ny fahitana dokambarotra sy ny fahitana azy ara-potoana. Eric Wheeler, CEO, 33Across.
Ankoatry ny fenitry ny indostria, ny mpanonta sy ny mpanao dokam-barotra dia tokony hijery akaiky ny salan'isan'ny fahitan'ny doka ary hamaritana raha toa ka hita eo amin'ny toerana lava ny doka mba hahazoana valiny na hisy fiatraikany lehibe. Mba hampivoarana bebe kokoa ny fampiasam-bolan'izy ireo amin'ny fanaovana dokambarotra niomerika, hampitomboana ny firosoana ary hialana amin'ireo teboka jamba, dia tokony hampiditra finday sy fampisehoana in-feed ao anaty fifangaroan'ny marketing ihany koa izy ireo.
Ny Puzzles crossword henjana indrindra dia azo vahana raha mamorona teny marindrano lehibe eo afovoan'ny piozila ianao. Amin'ny ankamantatra sarotra maro dia matetika manodidina ny 32 na 33 izy ireo. 33Amba mamoha ny piozila amin'ny fanaovana doka an-tserasera kalitao.
Tags: 33 manerana33acrossfomba fijerin'ny dokam-barotrafilankevitry ny naoty mediamrcdokambarotra fandaharanafanonerana vola ho an'ny mpitorytorolàlana azo jerena